DateMyPet.com : Gbasara Anyị
Mmadụ Bịa DateMyPet.com
Ọzọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị? Emela. A nzute na saịtị nke Pita ndị? Ee.
The echiche maka DateMyPet.com malitere n'oge a ije na nkịta m na anyị n'ogige ntụrụndụ obodo. Ka ọ dị na mbụ, folks ga-abịakwute anyị ma kwuo otú mara mma ọ bụ. A a ga-eduga a mkparịta ụka. Mkparịta ụka ndị nso si mfe causal okwu nkọwa banyere ndụ ha. Na-amabughị na anyị ga-akparịta ụka dị ka ndị enyi. WTF ike nke anyị anu ulo. Ha na-enye a nkịtị njikọ, nghọta nke ndị anyị bụ.
The folks m na-ezute na ndị a na n'ọnọdụ dị iche iche mbio ogologo oge obi ụtọ di na nwunye kpọrọ. Ọ bụ ezie na ndụ ha dị nnọọ iche, ha niile òkè a ịhụnanya maka anụmanụ. Ma dị ka Pita nwe ma ọ bụ a 'na-achọ na-abụ'. N'ịgwa kpọrọ, ọ tụrụ m n'anya otú ọtụtụ ndị na ha ụbọchị na mmekọrịta biri n'ihi na ndị ọzọ na onye bụ dakọtara na ịhụnanya ha maka ha anu ulo. Ndị a nso si 'ọ asị m nkịta drooling’ 'na ọ bụ ya bụ nfụkasị m cat’ na kpochapụwo 'ọ na-eche m crazy n'ihi na m na-emeso ha dị ka ụmụ ọhụrụ'. Mgbe mkpebi wee họrọ n'etiti onye ma ọ bụ Pita – ọ bụ a dịghị brainer n'ihi na ọtụtụ. The Pita meriri.
Ya mere, ebe anyị na-, “ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-akpa m, ị na-akpa m Pita”. WTF mbanye n'azụ a website. Ọ bụrụ na ị maara mbụ aka na mmadụ bụ onye a Pita n'anya, ọ ga-eme ka ihe a otutu mfe. Nke ahụ bụ a ike njikọ na ike ga-wuru n'elu.
DateMyPet.com bụghị naanị ọzọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị. Achọrọ m ya ka ọ bụrụ obodo maka Pita nwe. Na-achọ ịhụnanya ma ọ bụ enyi. Ya mere na-agbalị ya na-agwa anyị ihe ị na-eche.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị a Pita nwe, na ị na-nabata kwa. Ma dị nnọọ echeta, “…na-akpa m Pita”.
Ndị : N'ihi nkwado ajụjụ, biko Nbanye na akaụntụ gị
Nnyemaka: Ọ bụrụ na ị chọrọ inye isiokwu ọdịnaya maka anyị na saịtị, biko kpọtụrụ anyị na-ede akwụkwọ AT datemypet.com
Press ase: Biko n'okpuru gị arịrịọ pịa AT datemypet.com
hiwere na 2004, Ụbọchị My Pet ghọrọ ndị na-eduga mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị maka otu Pita hụrụ. Ya ịnọgide na-eto ma na mma-eje ozi anyị so, na 2014, Ụbọchị My Pet partnered na Venntro Inc (a zuru ụwa ọnụ media otu) ịghọ akụkụ nke ha zuru ụwa ọnụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị netwọk, eru ọtụtụ nde ndị kpọrọ gburugburu ụwa.